Eternal Bliss: यस्ता थिए सनकी राजाहरु
27/05/2010 06:29:00Naya Patrika
इतिहासमा नेपाल एकीकरण अभियानका नायकका रूपमा चिनिएका राजा पृथ्वीनारायण शाहको अर्को रूप धेरैलाई थाहा छैन　। उनी एकदमै क्रुर स्वभावका थिए　। आफूले भनेको काम पूरा नभए घनघोर रिसाउँथे　। राज्य चलाउन कुशल र निडर व्यक्तित्वको धनी भए पनि उनी रिस उठेको वेला कसैलाई बाँकी राख्दैनथे　। आफ्ना नातागोतालाई त तथानाम भन्ने नै भए, रिसाएको वेला सेनापति कालु पाण्डेलाई समेत 'काले' भनेर बोलाउँथे, उनी　। रिस उठेका वेला उनी अदब/बेअदब केही पनि जान्दैनथे　। कीर्तिपुरसित तीनपटक हारेका उनले अन्ततः कीर्तिपुर जितिछाडे　। र, कीर्तिपुरवासीका नाक र चुल्ठो काटेर आफ्नो क्रोध र सनकको अद्भूत उदाहरण दिएका थिए　।
पृथ्वीनारायणका पिता नरभूपाल शाहले पहिलोपटक नुवाकोट आक्रमण गर्दा दुईजना सेनापति खटाएका थिए, जयन्त राना र अमर पन्त　। काठमाडौं राज्यअन्तर्गत पर्ने नुवाकोटको लडाइँमा हार भएपछि नरभूपालले अमरलाई आफ्नो पि्रयपात्र बनाए　। उता, जयन्तलाई भने वास्तै गर्न छाडिदिए　। यसले जयन्तको चित्त दुख्यो　। उनले काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ललाई साथ दिए　। जयप्रकाशले उनलाई सेनापतिकै जिम्मा दिए　। पृथ्वीनारायण शाहले अर्कोपटक नुवाकोट हमला गर्दा जयन्तलाई गोर्खाली फौजमा र्फकन चिठी पठाए　।
जयन्तले आफूले जयप्रकाशको नुन खाएकाले फिर्ता नहुने जवाफ दिए　। यसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई निकै रिस उठाएको थियो- गोर्खाली फौजको कमान्डर नै दुस्मन फौजतिर लागेको भनेर　।
पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट जिते　। त्यसपछि बेलकोटमा बसेको जयन्तलाई जित्न लडाइँको तयारी गरेँ　। कालु पाण्डेले फौज तयारी अवस्थामा नभएकाले लडाइँ नगर्ने सल्लाह दिए　। पृथ्वीनारायण शाहले जँगिँदै 'काले, लडाइँ कति वेला लड्ने भनेर तिमीले सिकाउने होइन　। फौज ठीक पार' भने भन्ने केही इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन्　। लडाइँमा गोर्खाली सेनातर्फ निकै क्षति पुगे पनि अन्त्यमा जित गोर्खाकै भयो　। त्यसपछि उनले जयन्तलाई नियन्त्रणमा लिएर छाला काढेर मारे भने जयन्तका छोरा शंखमणिलाई पनि काटे　।
उनको सनकसँग जोडिएको अर्को पनि रोचक प्रसंग छ　। उनले भक्तपुरकी नेवार्नीसित बिहे गरेका थिए　। कम उमेरमै उनी क्षयरोगले थलिइन्　। त्यसपछि उनलाई कासी लैजाने सल्लाह भएछ　। डोलीमा राखेर कासी पठाइयो　। देवघाटको बाटोबाट लैजाँदै गर्दा पाल्पाका राजा त्रिविक्रमले पुथ्वीनारायणकी रानीको घुम्टो खोलेर अनुहार हेरे रे भन्ने सुनेपछि त्रिविक्रमलाई जेल हालेका थिए, पृथ्वीनारायणले　।
उनका पिता नरभूपालको मगजै गडबड् थियो　। आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा उनी तरुनी केटी लिएर वनतिर डुल्ने गर्थे　। एकहोरो स्वभावका उनी वेला-वेला असाध्यै रिसाउने गर्थे　। नुवाकोट र तनहुँसँग पराजय भएपछि उनमा तनाव चुलिएको पाइन्छ　।
पृथ्वीनारायणका कान्छा छोरा बहादुर शाह भने अरू कसैको सनकको नराम्रो सिकार भए　। नेपालको राज्य विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका उनी दरबारिया षड्यन्त्रमा परे　। नायवी रूपमा शासन चलाएका उनको अन्त्य अत्यन्त हृदयविदारक रह्यो　। उनलाई तेल खन्याएर मारिएको थियो　।
राजा रणबहादुर शाहलाई बौलाहा राजा भनिन्थ्यो　। हुन पनि उनी मानसिक सन्तुलन नभएका राजा थिए　। कहाँ, कहिले र कसलाई के गर्थे, केही भन्न सकिन्नथ्यो　। स्वेच्छाचारिता उनको व्यक्तित्वको अभिन्न हिस्सा थियो　। जे मन लाग्यो त्यही गर्थे　। छाडा थिए　। उनीमाथि कसैले अंकुश लगाउन सक्दैनथ्यो　। क्षणमै रिसाउने, क्षणमै खुसाउने ! ठेगानै नभएको मान्छे थिए, उनी　।
केही वर्षसम्म राजा भएपछि उनले छोरालाई धर्मपत्र गरी राज्य सुम्पिए　। त्यसको केही समयपछि फेरि राजा हुने इच्छा जनाए　। निर्माणानन्द स्वामी नाम राखेर केही भारदारलाई साथमा लिएर कासीतिर पनि हिँडे　। तर, त्यहाँ धेरै दिन टिक्न सकेनन्　। यस्तैखाले व्यवहारले उनलाई नोक्सान पुगेको पाइन्छ　।
रणबहादुरले खर्च बढी गरे भन्ने विषयमा हालको रणमुक्तेश्वरको एक घरमा कचहरी चल्दै थियो　। सो कचहरीमा सहभागी थिए- भीमसेन थापा, काजी त्रिभुवन प्रधान, शेरबहादुर शाह, बालनरसिंह कुँवर आदि　। कचहरीमा भनाभन बढ्दै गएपछि रणबहादुरका सहोदर भाइ शेरबहादुरले उनलाई ठाउँको ठाउँ तरबारले दुई टुक्रा पारिदिए　। यो कस्तो आक्रोश ? चित्त नबुझे रेटिहाल्ने　। सत्ता प्राप्ति र पदमा पुग्न यस्ताखाले घटना त्यतिबेला ख्याल-ख्याल हुन्थे　। राजाहरू मात्र होइनन्, सेनापति, चौतरियाजस्ता शक्तिशाली ओहदामा रहेकाहरू पनि आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाइछाड्थे　। उनीहरूको आवेग र सनक कहाँ कसरी प्रकट हुन्थ्यो, अनुमानै गर्न सकिन्नथ्यो　।
राजेन्द्रविक्रम भलादमी राजा भए पनि कहिलेकाहीँ उनी पनि सनक प्रदर्शन गर्थे　। उनको भलादमीपनको फाइदा सुरुमा भीमसेन थापाले उठाए भने, पछि जंगबहादुरले　। उनको कमजोर शासकीय शैलीकै कारण कोतपर्व, भण्डारखालजस्ता घटना भए　। राणाशासनको जन्म भयो　। राजा आफै नजरबन्दमा परे　। उनलाई कहिले भक्तपुर त कहिले हनुमानढोकामा राखिएको थियो　। नजरबन्दमै उनलाई फकाउन राम्री तरुनी पठाइन्थ्यो　। उनले बन्दी अवस्थामै इतिहासमा आफ्ना पुर्खालाई कति 'श्री'को दर्जा दिने भनेर लेखेका थिए　। उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई श्री ५२ भनेर लेखेका थिए भने कसैलाई श्री ८ त, कसैलाई श्री ५ ठीक हुने भनेर लेखेका थिए　। उनकी रानी राज्यलक्ष्मीलाई देश निकाला गरियो　। राजेन्द्रका छोरा देवेन्द्रलाई विष पिलाएको झुटो आरोप भीमसेन थापामाथि लगाइयो　। त्यसवेला राजाले केही प्रतिकार गर्न सकेनन्　। त्यो झुटो लान्छनाको अपमान सहन नसकेर भीमसेन जेलको झ्यालको सिसाले रेटिए र घाइते भए　। त्यसको केही दिनपछि मात्र उनको मृत्यु भयो　। लास विष्णुमतीमा फालियो　। कसैले वास्ता गरेनन्　।
इतिहासका अर्का सनकी राजा हुन्- सुरेन्द्रविक्रम शाह　। वास्तवामा उनलाई सनकीहरूको सरदार नै भनिदिए पनि हुन्छ　। रिसाएको वेला बाबुलाई समेत कुट्न पछि नपर्ने ! आफूले चाहेको कुरा हुनैपर्ने, पाउनैपर्ने　। वेला-वेला राजगद्धी छाड्दिन्छु भनेर जंगबहादुरलाई धम्क्याउँथे　। जंगबहादुर उनलाई फकाउन पिठ्युँमा बोक्ने गर्थे　। युवा अवस्थामा एकदमै जोशिला जंगबहादुर सुरेन्द्रले भनेका कुरा सबै पुर्‍याइदिन्थे　। सुरेन्द्र उनलाई कहिले जिउँदै हात्ती पक्रन लगाउँथे भने कहिले त्रिशूलीमा हामफाल्न लगाउँथे　। धरहराबाट हामफालेर जंगबहादुरले बहादुरी देखाएकै थिए　। यी सबै काम सुरेन्द्रलाई खुसी पार्न गरेका थिए, जंगबहादुरले　।
त्रैलोक्य विक्रमको कलिलो उमेरमै मृत्यु भएपछि उनका जेठा छोरा पृथ्वीविक्रम राजा भए　। उनले चारपटक बिहे गरेका थिए　। उनका दुईजना रानी भारतीय थिए भने दुईजनाचाहिँ वीरशमशेरका छोरी थिए　। निडर स्वभावका पृथ्वीविक्रम मदिराप्रेमी थिए　। उनकी आमा जंगबहादुरकी छोरी भएकाले सम्बन्ध राणासँग जोडिएको थियो　। त्यसैले उनलाई कड्किन र रिस पोख्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो　। उनी तथानाम भन्न कसैलाई बाँकी राख्दैनथे　। प्रधानमन्त्रीले मागेजति पैसा दरबार नपठाएको भनेर उनले पठाइएको पैसा जलाइदिएका थिए　। पछि मागेजति पैसा पुर्‍याइएको थियो　।
सनकी त राणाहरू पनि थिए　। राजाहरूभन्दा कम्ती सनकी थिएनन्　। प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा आफ्नो पालो नआउने बनायो भनेर प्रधानमन्त्री रणोद्वीपलाई वीरशमशेर पक्षका राणाहरूले गोली हानेर मारे　। भाइ पक्षलाई बाइपास गरेको भन्नेमा वीरलगायत खड्ग, डम्बर, भीम आदि थिए　। नेपालको इतिहासमा कार्यकालमै गोल्ाी हानी हत्या गरिएका प्रधानमन्त्री रणोद्वीप नै थिए　। यो वि.सं. १९४२ सालको घटना हो　।
राजा त्रिभुवन निकै दूरदर्शी थिए　। शाहवंशको गुमेको शक्ति फर्काउनु नै उनको मुख्य धेय थियो　। त्यसका लागि भारतमा निर्वासनमा बसेर प्रजातन्त्र ल्याइछाडे　। उनको सनक सही कुराका लागि हुने गरेको पाइन्छ　। पढेलेखेका भएकाले उनी त्यति घमण्डी थिएनन्　।
पृथ्वीनारायण शाहपछिका शक्तिशाली राजा हुन्, महेन्द्र　। उनी एक अर्थमा दम्भी पनि थिए　। र, राज्य गर्ने नीति थियो, उनमा　। कतिले अधिकारको दुरुपयोग गरेर पञ्चायत लादेको भन्ने पनि गर्छन्　। शाहवंश शक्तिशाली भइरहोस् भन्ने ध्येय देखिन्थ्यो उनको　। स्वाभवाले त हठी थिए, उनी　। आफूले चाहेको पूरा हुनैपर्ने　। रत्नसितको बिहे त्रिभुवनले चाहेका थिएनन्　। तर, महेन्द्रले रत्नै चाहिन्छ भनेर मरिहत्ते गरेका थिए　।
इतिहासका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई धेरैले सनकी भन्छन्　। तर, उनका धेरै कुरा अझै बाहिर आइसकेका छैनन्　।
प्रस्तुतिः रामदत्त पन्त
Posted by Happiness Seeker at 6:20 PM
Labels: prithvi narayan shah